REENOEMANN: နိုင်ငံဂျားပြန်ရဲ့ ငြီးချင်း (Tag ပို့စ်)
ကိုရီနိုရေ အစဉ်ပြေပါစေ၊ဗျာ အကြွေးမြန်မြန်ကျေပါစေဗျာ။ ပျော်ရွှင်ပါစေဗျာ။ ငွေဈေးတွေလည်းတက်ပါစေဗျာ။ အားလုံးအားလုံး အိုကေမှာ စိုပြည်ပါစေဗျာ။
ကိုရီနိုရေ.. အခု စင်္ကာပူ ၁ ဒေါ်လာ ၇၅၀ ကျပ်ပေါက်နေပြီလို့ကြားပါတယ်။ အမြန်ဆုံး အားလုံး အဆင်ပြေပါစေဗျာ။
ဒီနေ့ ၇၅၅ကျပ်တဲ့ မောင်လေးရေ၊ အမြန်အကြွေးတွေ ကြေပီး ငွေဈေးတတ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်
လာခံစားသွားတယ် အကိုရေ အစစအရာရာ အဆင်ပြေနေပါစေ
သယ်ရင်းရေ ဘာမှ မပူနဲ့
အကိုတွေ အမတွေ ညီညီမတွေလွှဲထားတဲ့ငွေတွေကို
ဒါပေမယ့် ဆောင်းတွင်းကာလ နှင်းတွေပိတ်နေလို့
မောင်လေးေ၇..အားမလျှော့နဲ့ ကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးလူတွေတောင် ကျွေးနဲ့ကင်းတာမဟုတ်ဘူး ဒါလောက်တော့ အပျော့ပေါ့။ ဘ၀တူ မောင်နှမတွေ အများကြီးရှိတယ်။ မောင်လေးအတွက် လှပတဲ့အနာဂတ် ရောက်လာမှပါ။
ဘယ်လောက်လေသွားလဲလို့ .. သူများတောင်ဆက်တက်ချင်စိတ်မရှိဖြစ်သွားတယ်ထင်တယ် .. ဘာမှအားမလျှော့နဲ့ .. အားလုံးတူတူချည်းဆိုတော့ အဖော်ရှိတယ် .. သိလား .. :D
အစ်ကိုရေ .... အတုံ့အလှည့်ဆိုတာရှိပါတရ် ။ လူဆိုတာ အမြဲတမ်းလည်း ကံမဆိုးနေသလို အမြဲတမ်းလည်း ကံကောင်းမနေပါဘူး ။ ဒါပေမဲ့ဗျာ ..... ကံဆိုတာ အလုပ်တဲ့ .. ။ အလုပ်ကောင်းရင် ကံကောင်းမယ်တဲ့ ။ မသိတော့ဘူး စဉ်းစားသာကြည့်တော့ ။ တစ်ခုတော့ရှိတရ် .... ကိုရီနိုမာန် အဆင်ပြေပါစေလို့ ရင်ထဲကနေ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ဆုတောင်းပေးသွားပါတရ် ။
ရီနိုရေ....ကောင်းတဲ့ဖက်က တွေးရင် အကြွေးရှင်ဆိုတာ သူ့ထမင်းသူစားပြီး ကိုယ့်ကို သတိရပေးနေတဲ့သူ
လေကွာ ...တကူးတက ခန့်ထားစရာမလိုပဲ ကိုယ့်ကို စောင့်ကြည့်ပေးနေတဲ့ သူဆိုတော့ သိပ်အဆိုးကြီးတော့ မဟုတ်ပါဘူး..။
တခါတလေ ကျိန်ဆဲတာမျိုးရှိရင်လည်း သူ မရင့်ကျက်သေးလို့ပဲ လို့ မှတ်ယူပေးပါ..။
ငြီးနေတဲ့ သူကို ပျော်စေချင်ရုံသက်သက်နဲ့ ရေးတာပါ..။
ညည်းလိုက်တာ.. ခိုကျနေတာပဲ..း)
ကြွေးမြန်မြန်ကြေပြီး အဆင်ပြေပါစေ မောင်လေးရီနို
ရေ.း) နေဦးအစ်မထီထိုးထားတယ်... ထီပေါက်ရင်
အတိုးလွတ်နဲ့ ပိုက်ဆံချေးပေးမယ်နော်..း))
ဘလော့ဂ် ဘော်ဒါတွေ အများကြီးပဲ
တစ်နေ့ နေ့ တော့ဖြစ်၍လာလိမ့်မည်........
အကြွေးတွေမြန်မြန်ကျေပါစေမောင်လေးရီနိုရေ... ဘဝဆိုတာဒီလိုပါပဲ. ရုန်းကန်ရင်ချီတက်ရမှာပဲလေ.. တနေ့နေ့တော့ အဆင်ပြေသွားမှာပါ.. အမတို့လဲ ဒီလိုပါပဲ.. စိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့..
တော်ပါသေးရဲ့ အဲ့ တဂ်လေး မမ်ိလို့
မိလိုက်ရင် အကိုထက် အရှက်ကွဲမယ်း)